Kedu ihe bụ ọmịiko na otu esi eme ya - otu esi eme ego na onyinye?
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-eweta ọtụtụ ngwongwo na ọrụ, na-ekere òkè n'ịdị nro. Ọ na-ewetara onye ọ bụla uru bara uru. Ndị ahịa, ekele maka obi ebere, chọpụta nhazi kachasị mma nke ngwaahịa / ọrụ na ụgwọ maka ha. N'ihe banyere mmeri, ndị na-eme ihe nkiri na-enweta nnukwu nkwekọrịta bara uru ma nwee ike nweta aha ọma.
Obi ebere - gini bu?
Otu ala ma ọ bụ ụlọ ọrụ nkeonwe nwere ike ime ihe dị nro. Ihe mgbaru ọsọ bụ mgbe niile - ịchọta onyinye kacha mma. Ndabere nke mmejuputa na-agụnye ndokwa ndị edere n'akwụkwọ iwu:
Ihe dị nro na otu esi eduzi ya bụ nhọrọ ịsọ asọ. Site na itinye aka na ụlọ ọrụ ahụ, ha nwere ike inye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Onye ahịa ịhọrọ n'etiti ụlọ ọrụ ndị na-ekere òkè dị mma maka nhọrọ ya. Enweghị mmasị na aghụghọ. Usoro nke onwe ya doro anya na uzo maka onye ọ bụla, ọ bụrụ na iwu ahụ emebiela, mgbe ahụ, ntaramahụhụ ziri ezi na-esote. Nke mbụ, foto ụlọ ọrụ ahụ ga- ata ahụhụ.
Ụdị ụdị ọrụ
Ọ bụghị onye ọ bụla maara otú esonye na obi. Ọ dị mkpa ịchọta nke asọmpi bara uru maka otu ma ọ bụ ọzọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a chọrọ. E nwere ụdị dị iche iche a na - ekewapụrụ obi:
Kọwaa . Otu ihe dị iche iche nke ụdị a bụ na ọ dị nnọọ nhata ma enwee asọmpi ike. Nchọgharị ahụ bụ onye na-ebu ihe a pụrụ ịdabere na ya. Onye ọ bụla nwere mmasị na mmekọrịta dị ogologo oge pụrụ itinye aka. A na-agwa ndị mmadụ ọkwa mmalite nke ozi ndị dị otú a iji dọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị so na ya.
Emechiri . Aha ahụ na-ekwu maka onwe ya. Akụkụ nke òkè dị oke oke, ebe ọ na-ewepụtara otu ngwaahịa. Dịka ọmụmaatụ, ngwá agha.
Nhọrọ nhọrọ na- abụ nke abụọ nhọrọ. Mgbe ha tinyechara akwụkwọ, dịka ntụle ahụ nyere, a na-ahọrọ ndị bidoro n'etiti onwe ha. N'ikpeazụ, ọnụ ọgụgụ ha anaghị eru asaa. Ndị na-ere ahịa na-agafe nhọrọ nwere ike isonye ozugbo.
A na-eji nrịaji abụọ na-arụ ọrụ iji ghọtakwuo ahịa ahịa. Na nke mbụ, ndị niile nwere obi ọmịiko, onye ahịa ahụ na-arụ ọrụ ma na-ekwurịta okwu na ha. N'okwu ndị kachasị mmasị, ọrụ ahụ na-aga n'ihu, enwere ntụpọ, arụ ọrụ ahụ dị mma, a na-atụle ọnụahịa ndị ahụ.
Ebee ka ị ga-achọ nlele?
Ngwakọta ahọrọ nke ọma na-eme ka o nwekwuo ohere inweta ya. Nchọpụta maka azụ nwere ike ghara ịdị ngwa na mfe, ịkwesịrị ịghọta ọnọdụ, hụ ọtụtụ onyinye dị ka o kwere mee. Isi ihe bụ ịghọta kpọmkwem ihe dị nro. Chọta ọkwa dịgasị iche, ma ndị mmadụ ma ndị mmadụ na ụlọ ọrụ nwere ike ịntanetị. Ihe kachasị ewu ewu bụ ndị na-elekọta eletrọniki. A na-eme ha na ebe ndị pụrụ iche nke gọọmentị na-achịkwa. Ka ị na-achọ saịtị dị mkpa, ị kwesịrị iji nlezianya nyocha ihe ndị onye ahịa chọrọ.
Kedu otu esi esonye n'inye onyinye?
Otu usoro mgbasa ozi dị iche iche na-etinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke asọmpi. Ịhọrọ ụlọ ọrụ nke arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ma jide n'aka na ọnọdụ dị mma, ị ga-enyocha oge nkwenye. Ọ bụrụ na ngwa ahụ ka kwere omume, jiri nlezianya mụọ iwu ọnụahịa. Nzọụkwụ ndị ahụ dị mfe na nghọta na ndị niile so na ha zutere ha.
Kedu otu esi esonye na obi maka onye ozo? E nwere atụmatụ ole na ole. Ezi ngwaahịa na ezigbo ego bụ usoro nke iwu a ga-eji merie. Mgbe ị mụọ ahịa iji nye ihe nwere ike ịmasị onye ahịa. Ọ ga-adị mkpa ịmepụta mbinye aka na kọmputa. Ike ya dị ka ọ dị ugbu a, ọ na-anọchite anya ọkụ ọkụ na data gị ma dị mkpa ka ị banye na ngwa ngwa. Nghọta doro anya banyere ihe dị nro n'eziokwu na ihe mere otu siri ike na-eweba n'ime ya bụ ọkara nke ihe ịga nke ọma.
Kedu ka edebanye aha na nro?
Mgbe mbinye aka dị njikere, ị ga-aga n'ihu na-esote. Ọ dị mkpa iji jupụta ebe a n'ụzọ ziri ezi na n'ụzọ ziri ezi, yana ịdekọ akwụkwọ ndị dị mkpa. Ịtụle ngwa ahụ na-ewe ihe dịka ụbọchị abụọ. Mgbe ị nwere ike itinye maka itinye aka na obi. Mpempe akwụkwọ ndị achọrọ maka òkè gụnyere:
akwụkwọ nkwado nkwado;
akwụkwọ na-akwado na ịkwụ ụgwọ ụtụ isi niile;
otu akwụkwọ si n'aka ụlọ ọrụ ụtụ isi na enweghị ụgwọ;
akwukwo ulo akwukwo nke ga akwado nkwenye ego;
akụkọ ndekọ, ọtụtụ mgbe maka afọ gara aga;
Asambodo maka ngwaahịa ndi edebere maka obi;
nzọụkwụ ikpeazụ bụ iji mechie akụkọ ahụ. Ọ bụrụ na a kwụrụ ụgwọ, a ga-akwụ ụgwọ n'aka ya. Dị ka a na-achị, ngwugwu akwụkwọ iji weere òkè n'inye onyinye bụ otu.
Kedu otu esi ekwurịta okwu na obi?
Okwu nke asọmpi dị mfe ma kwe ka ịnwale aka ha na ụlọ ọrụ nke ụdị ọrụ niile ma ụlọ ma ndị mba ọzọ. Ndi IP nwere ike itinye aka n'inye onyinye? Azịza ya bụ ee! Otu ọnọdụ ahụ metụtara ha, ọdịiche dị na usoro ụtụ isi. Ruo oge ikpeazụ, a na-ezobe ndị bidders, ndị na-asọ asọ, dịka iwu, anaghị ekwurịta okwu. Iji hụ na onye na-azụ ahịa adịghị enwe obi abụọ banyere ịkwụwa aka ọtọ nke onye ahịa, ị nwere ike ịkpọtụrụ tupu ịmalite ịmalite ma chọpụta ihe mgbaru ọsọ ya .
Kedu otu esi emeri obi ebere?
Dika ndị ọkachamara si kwuo banyere ijide azụmaahịa, ahụmahụ na ịhọrọ bụ isi ihe ga-eme ka ihe ịga nke ọma. A gwara ndị mbido ịmalite mkparịta ụka dị nta ma jiri nwayọọ nwayọọ na-aga n'ihu n'enyemaka ndị isi:
Ugboro ugboro, otu ụlọ ọrụ na-ekere òkè n'ọtụtụ ahịa, azụmaahịa na asọmpi dị iche iche, nke ka ohere nke imeri, ọ bụ naanị site na ahụmahụ na-abịa ghọta ihe dị nro.
Ọ dị mkpa ịmepụta ngụkọta ezi ego nke ezi ego. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-efunahụ ahịa n'ihi na, n'ihi enweghị ego, ọ gaghị enwe ike iji mezuo okwu nke obi dịka ihe niile chọrọ.
Ndị mmeri na-ekwu okwu, nzọụkwụ mbụ iji merie n'ọrịrịrị bụ ihe a na-adọrọ mmasị maka inweta òkè, nke ga-abụ ụdị azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ. O kwesịrị ilekwasị anya naanị àgwà na àgwà nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa ahụ kwuru. N'ịghọta atụmatụ ahụ, dịka ntụgharị dị nfe, enwere ike ichikota na ngwa na-ezighi ezi na-achọpụta ndị mmadụ tupu asọmpi amalite.
Ịtụle ihe ejiri n'aka ga-abụ ihe mkpali maka ịhọrọ ụlọ ọrụ. Ngwa ndị na-enweghị ọrụ ikike, ụfọdụ ọrụ nro adịghị eche.
Kedu otu esi arụ ọrụ n'enyemaka?
Ọ bụrụ na ikpebiere ike itinye aka na nkwekọrịta ahọpụtaworị, mgbe ahụ ọ bara uru ịmalite ịkwaga n'ógbè a site na nhọrọ nke onye ọrụ ahụ, bụ onye ga-anakọta akwụkwọ ma nyochaa ụlọ ọrụ ahụ maka ikere òkè na asọmpi ọ bụla e nwere na mbụ. A na-eme nchọpụta maka obi kwesịrị ekwesị dịka ụfọdụ amaokwu si dị:
okwu banyere okpu;
Mgbe achọrọ ụlọ ahịa ịchọtara achọrọ, ọ dị mkpa ka ị mụọ ihe ndị dị mkpa nke ọrụ ebere maka akwụkwọ na ndebanye aha ha, oge ịkwụsị akwụkwọ na arịrịọ onye ahịa maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Enwere ike ịchọta ozi banyere azụmaahịa na saịtị ndị ọkachamara. A na-atụ aro ịmalite site na saịtị ndị a gosipụtara, ndị nwere ike ịmalite na-agakwuru ndị ọkachamara ma nyefee ọrụ "Nkwado Nkwado," nzube ya bụ ịmepụta ọnọdụ kacha mma maka mmeri nke onye ahụ.
Olee otu esi eme ego n'inye onyinye?
N'ihe mmeri, ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya ka e nye iwu. Ọ bụrụ na ọ bụ isi ala dị nro, mgbe ahụ, ọ ga-abụ nnukwu na uru. Mmeri ahụ na-enyekwa nkwalite nke ọkwa nke ụlọ ọrụ ahụ, ngwaahịa ya ga-amalite ịzụta ọtụtụ mgbe, a ga-enyekwa ọrụ ọrụ. Inwe ego n'enye ego nwere ike ịkwado, na ikere òkè nwere ike iweta ego dị ukwuu na ụlọ ọrụ ọ bụla.
Nchịkọta ojii nke ndị ọrụ
Kedu ka esi tufuo ụgwọ?
Ahịa bara uru
Ịkpọ òkù na ụlọọrụ Ọhụrụ
Olee otú iji malite inweta na Youtube?
Ihe iseokwu nke ego ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ?
Kedu otu esi echekwa ego n'ulo?
Kedu ihe mere nrọ nrọ?
Ihe ọṅụṅụ Chokeberry
Karịa ịsa friji n'ime?
Nwa ebu n'afọ na-adịghị edozi ahụ
Mexico - injections
Kedu ihe akpa nwanyị dị?
Squid yiri mgbaaka na batter
Ogbugba ogwu maka mkpịsị aka 1
Nwanyị aka na ụkwụ
Ihe ngosi nke ụgbọala na Andorra
Ogwe igwe maka kichin
Kedu ihe m ga-enye nne nne m ruo afọ 80?
Ihe eji eji aka
Moby nyere akwukwo na-akwa isi ochicho nke ochichi nke opi
Uwe na senti - ònye kwesịrị ekwesị na ihe ị ga-eyi?
Enwere ike ichi nwanyi ime ime?